Sunday, June 16th, 2019 - 20:49:14
Reyes haddii aad ku taqiin Arsenal wuxuu markan wajahayaa Man City "Sawirro"
0 Wednesday October 21, 2015 - 15:07:28
Jose Antonio Reyes ayaa heshiis la gaaray Arsenal January 2004 markaas oo uu ahaa 20 sano jir.
Waa sidee Timaha Nasri Kulanka Sevilla? halkan ka Arag adigaa yaabi doonee!!!
0 Wednesday October 21, 2015 - 14:53:05
Samir Nasriga Kooxda Man City iyo xulka France ayaa la filayaa in uusan caawa ciyaari Karin kulanka Kooxda City ay Etihad ku soo dhaweyneyso Kooxda Reer Spain ee Sevilla.
Rakitic oo yiri waa Aniga geesiga Barca
0 Wednesday October 21, 2015 - 09:33:26
Laacibka beddelka kusoo galay ee Ivan Rakitic ayaa dhaliyey 2 gool, kulankii Barcelona ay ugu dambeyn uga badisay BATE Borisov 2-0 oo Champions League, Group E ay isku fara saareen dalka Belarus.
Barcelona oo ajendeheeda ku darsatay Robin Van Persie
0 Tuesday October 20, 2015 - 21:22:05
(Kubadbile) - Kooxdda kubadda cagta ee Barcelona ayaa u dirtay dad soo indho indheeya weeraryahankii Arsenal iyo Manchester United Robin Van Persie.
Benitez oo maallin walbe la hadla C.Ronaldo
0 Tuesday October 20, 2015 - 20:23:33
(Kubadbile) Maareeyaha kooxda Real Madrid Rafael Benitez ayaa qirtay inuu maallin walbe la sheekeysto oo uu la hadlo hogaamiyaha kooxdiisa C.Ronaldo.
Lavezzi oo heshiis la gaaray Barca
0 Tuesday October 20, 2015 - 11:24:10
Wararkii u dambeeyay ayaa sheegaya in kooxda Barcelona ay la heshiisay Laacib kale oo kasoo jeeda Dalka Argentina, kaasoo Saaxiib dhow la ah Messi.
Man City oo ku biirtay raadinta Krychowiak
0 Tuesday October 20, 2015 - 10:33:24
Daily Telegraph ayaa Maanta Boggiisa hore ku daabacay in ay kooxda Man City ku biirtay Loollanka lagu raadinayo Laacibka wacdaraha ka dhigay Horyaalka Spain ee Krychowiak.
Edison Cavani oo ka digay halista Real Madrid
0 Monday October 19, 2015 - 18:01:41
(Kubadbile) Paris Saint-Germain weeraryahankeeda Edinson Cavani ayaa uga digay xidigaha kooxdiisa inay ku jiraan qaab sare si ay ula macaamiloodaan kooxda Real Madrid kulanka Arbacada ka dhici doona Paris.
C.Ronaldo oo jeebka loo gelin doono lacag badan kadib markii laga diiday inuu Film jilo
0 Monday October 19, 2015 - 16:14:45
(Kubadbile) Cristiano Ronaldo ayaa lasoo werinayaa in jeebka loo gelin doono adduun lacageed dhan €20m kaddib markii uu ogolaaday in Aqalka uu ku leeyahay New York lagu duubo qeyb ka mid ah Film cusub.
Sawiro : Ronaldo,Messi,Totti Oo Tababarayaal noqon doono 2035, wajigoodu siduu u ekaan karaa?!!
0 Visits: 1294 | Monday October 19, 2015 - 14:09:00
(Kubadbile) Jariidada la yiraahdo TOP ElEVEN ee Caalamiga ah ayaa soo daabacday sawirro dhowr ah oo ay ka samaysay xidigaha hadda kubadda cagta ciyaara sidda ay noqon doonaan sanadada 2030-2045 iyaga oo tababarayaal u noqonaya naadiyadooda ay hadda u ciyaaraan .
Pedro oo la qabsan la' EPL, Sababtu maxay tahay?
0 Monday October 19, 2015 - 11:38:43
Laacibka dalka Spain ayaa weli la qabsan la' Blues tan iyo August ma uusan dhalin goolashii laga filan karay.
Chelsea oo hoggaamineysa Kooxaha doonaya Pastore
0 Monday October 19, 2015 - 11:27:14
Chelsea ayaa shaaca ka qaadday in ay amaah ku dooneyso Laacibka Dalka Argentine iyo kooxda PSG Pastore.
Karim Benema: 'Kuma biirayo Arsenal'
0 Monday October 19, 2015 - 11:12:01
Real Madrid Weeraryahankeeda Karim Benzema ayaa sheegay in uusan ku biireyn kooxda Arsenal marka ay furanto daaqadda kala gadashada Ciyaartoyda.
Neymar oo heshiiska u kordhinaya Barcelona
0 Monday October 19, 2015 - 11:11:56
Barcelona Xiddiggeeda Neymar ayaa ku qanciyey Taageerayaasha Kooxdiisa in uu sii joogayo Camp Nou meeshan ka saaray ka mid noqoshada Manchester United.
Simeone: Gimenez Geesinimadiisu waa mid Bannaanka taalla
0 Monday October 19, 2015 - 10:38:36
Real Sociedad ayaa ku fashilantay in ay joojiso Weeraryahanka Kooxda Atletico Madrid Wuxuuna Simeone ku sheegay geesi la celin waayay.
Manchester City oo soo qaadaneysa wiil Spain ka dheela
0 Sunday October 18, 2015 - 20:14:36
(Kubadbile) Kooxda Manchester City ayaa wadda qorshe ay gegegada Etihad Stadium ku keeneyso 19 jirka weerarka uga dheela kooxda Almeria Jose Angel Pozo.
Real Madrid oo aan hubin inay heleyso Benzema kulanka PSG
0 Sunday October 18, 2015 - 14:13:57
(Kubadbile) Rafael benitez ayaa shaki gelinaya in xidigiisa weerarka ka dheela Karim Benzema uu heli karo adeegiisa kulanka ay Arbacada la dheelayaan kooxda PSG.
Mourinho oo doonaya Paco Alcacer
0 Sunday October 18, 2015 - 08:54:11
Mourinho ayaa sheegay in Chelsea si ay weerarkeeda u xoojiso ay qaadaneyso Laacika Weerarka uga ciyaara Kooxda Valencia, Paco Alcacer.
« Prev1 ... 150151152153154155156 ... 165Next »